मालीको एक सैन्य कार्यालयमा ह’म’ला, ५३ सैनिकको ज्या’न गयो — Imandarmedia.com
१के देउवाकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ला ?
२बाँके भेरी अस्पतालमा ३ घण्टामा ३ संक्रमितको मृत्यु
३कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, पार्टी हृवीप उल्लंघन गर्ने तीन प्रदेशसभा सदस्य बने मन्त्री
४सर्वदलीय बैठक सकियो, के के भयो निर्णय
५शहरी क्षेत्रका विद्यालयआगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस
६सर्वदलीय बैठकमा सभामुख विरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश
७साहित्यकार श्यामदास वैष्णवको निधन
८गर्मी बढेसँगै सर्लाही सदरमुकाम तराईकामा लामखुट्टेको प्रकोप ह्वात्तै बढ्यो
९ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नजाने प्रचण्ड
१०कस्तो छ आजको मौसम ? यी हुन् आज असिनासहित वर्षा हुन सक्ने स्थान
११आईपीएल : धोनीको दुई सयौं खेलमा चेन्नाई विजयी
१२भारतबाट फर्किएका १५ जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
मालीको एक सैन्य कार्यालयमा ह’म’ला, ५३ सैनिकको ज्या’न गयो
एजेन्सी । मालीको एउटा सैनिक कार्यालयमा भएको ह’म’लामा परी ५३ जना सैनिकको ज्या’न गएको छ । देशको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा शुक्रबार भएको ह’म’लालाई सरकारी अधिकारीहरुले आत’ङ्क’वा’दी हमला भनेका छन् । इस्लामिक ल’डा’कूहरुले पछिल्लो समय गराएको हिं’सा मध्येको यो ठूलो भएको पनि अधिकारीहरुको भनाई छ ।
ह’म’लामा परी एक जना सर्वसाधारणको पनि ज्या’न गएको जनाइएको छ । नाइजरसँगको सिमानामा पर्ने मेनका क्षेत्रको इन्डेलिमानमा रहेको सैनिक कार्यालयमा ह’म’ला भएको देशका सञ्चार मन्त्री याया सान्गारेले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् जानकारी दिएका छन् । ‘अहिले अवस्था नियन्त्रणमै छ, श’व संकलन गरेर पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले लेखेका छन् ।
ह’म’ला र क्षतिको पूर्ण विवरण भने आइनसकेको उनले बताए । घटनाका बारेमा अहिलेसम्म कसैले पनि जिम्मेवारी नलिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । त्यस क्षेत्रमा अल कायदाआबद्ध जिहादीहरुको प्रभाव बढी रहेको मानिन्छ । फ्रान्स नेतृत्वको सैन्य अभियानले जिहादीविरुद्ध सुरक्षा कारबाही चलाएको थियो । तर हिंसा अन्त्य भने हुन सकेको छैन ।
यस्तै उता फिलिपिन्समा पछिल्लो एक हप्ताको बीचमा तीन पटक भूकम्प आएको छ । पछिल्लो पटक बिहीबार पनि भूकम्प गएको छ । देशको दक्षिणी क्षेत्रमा आएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तीमा पाँच जनाको ज्या’न गएको छ भने अरु केही घाइते भएका छन् ।
अधिकारीहरुका अनुसार अरु कैयौँ घरसहितका भौतिक संरचनाहरु भत्किएका छन् । यसअघिका दुई भूकम्पले पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । मिन्डानाओ पहाडलाई केन्द्रमा पारेर ६ दशमलब ५ म्याग्नीच्युडको भूकम्प आएको अमेरिकी भूगर्भ विभागले जनाएको छ ।
त्यही क्षेत्रमा गत मङ्गलबार आएको भूकम्पमा परी अरु आठ जनाको ज्यान गएको थियो । भूकम्पको केन्द्रविन्दुदेखि झण्डै ४५ किलोमिटर टाढा पर्ने दक्षिणी क्षेत्रको मुख्य सहर मानिने डाभाओ सहरमा पनि धेरै क्षति पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । भत्किएको घरमा परेर नौ जना घाइते भएका छन् ।
उद्धारकर्ताले उनीहरुलाई उद्धार गरेपनि अन्य एक जना त्यहीँ च्यापिएको अनुमान गरिएको छ । कोताबाटो प्रान्तमा पाँच जनाको ज्या’न गएको जनाइएको छ । ज्या’न जाने मध्ये एक जना स्थानीय सरकारी अधिकारी पनि रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यही अक्टोबर १६ देखि आएका तीन भूकम्पमा परी अन्य क्षेत्रका पनि धेरै भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको अधिकारीले जनाएका छन् ।
कोरोना संक्रमित बढेपछि आज बुधवार देखि कर्फ्यू जारी
भारतमा कोरोना एकदिनमै सर्वाधिक १ लाख ५२ लाख संक्रमित